Duqeyda dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada Galbeedka Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ee New Boolis inay laayeen dad rayid ah oo xoolo dhaqato.
Faahfaahin ka soobaxaysa dagaal ka dhacay deegaanka Waanbati ee degmada Wanalaweyn
Wararka ka imanaya deegaanka Waanbati ee degmada Wanalaweyn ayaa sheegaya in ay ka jirto xiisad colaadeed iyadoo halkaas ay isku horfadhiyaan ciidamada dowlada iyo kuwa Alshabaab.
Dagaal khasaare dhaliyay oo ka dhacay duleedka Degmada Marko ee Gobolka Shabeellada Hoose
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen iska-horimaad ka dhacay duleedka degmada Marko ee xarunta Gobolka Shabeellada Hoose.
Aqriso Qodobo dhowr ah oo looga heshiiyay dagaalkii ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Itoobiya
Sagal Radio Services • News Report • June 8, 2015
Iyadoo baryahaani dambe uu sii kordhaayay Khasaaraha ka dhalanaayay dagaladii ka socday xadka gobolka Galgaduud uu lawadaago ismaamulka dowlad degaanka Ethiopia, ayaa waxaa arrinta dagaalkaasi laga gaaray Heshiis dhowr qodob ka kooban.
Dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Awdheegle iyo Mubaarak
Dagaalo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe ilaa saaka waabarigii hore waxaa uu ka socday degmada Awdheegle iyo deegaanka Mubaarak, halkaasoo todobaadkii hore Al-Shabaab ay muddo kooban la wareegeen.
Dagaal beeleed saaka dib uga qarxay deegaanka Deefow ee Gobolka Hiiraan
Wararka ka imaanaya deegaanka Deefow ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka uu dib uga soo cusboonaaday dagaal u dhaxeeya labo beelood oo horay deegaankaas ku dagaalamay.
Faah-faahin:Al-shabaab iyo Shacab ku dagaalamay mahaddaay
Faah-faahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa Dagaal ka dhacay Duleedka Degmada Mahaddaay ee Gobolka Shabellaha dhexe,kaas oo dhexmaray Al-shabaab iyo Dadka Deegaanka.
Dagaal Khasaaro geystay oo ka dhacay Marko iyo warar kala duwan oo kasoo baxaayo Dagaalka.
Warka laga helaayo Duleedka Degmada Marka ee G/Sh/hoose, ayaa sheegaya in Ciidamo kawada tirsan Dowlada Federaalka Somalia ay ku dagaalameen halkaasi.
Dagaallo Dhex-maray Ciidammada Maamulka Jubba iyo Xoogagga Al-shabaab
Dagaallo xooggan ayaa gelinkii dmbe ee shalay ilaa xalay fiidkii siyaabo kala duwan uga dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada hoose, iyadoo dagaalladani ay u dhexeeyeen ciidamada maamulka Jubba oo garab ka helaya kuwa AMISOM iyo xoogagga Al-shabaab.
Dagaalo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex mareen qeeba ka mid ah gobolka Baay
Dagaalada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa u dhaxeeyo ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab waxa ayna ahaayeen kuwa aad u xoogan waxana lasheegayaa in ay dagaalka marka hore qadeen ciidanka dowlada soomaaliya sida uu sheegay mas,uul u hadlay maamulka Dagmada Bardaale.
Shebaab iyo ciidamada Kenya oo ku dagaallamay Xadka Kenya iyo Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • May 26, 2013
Dagaal culus ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay deegaanka Dhamaajaaleey oo ku yaal gudaha xadka ay Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, waxaana dagaalkaasi uu u dhexeeya xoogagga Al-shabaab iyo cutubyo katirsan ciidamada Kenya oo ku sugnaa halkaasi.
Dagaal beeleed ka dhacay Mandheera oo tiro dad ah ay ku dhinteen
Ugu yaraan 10-qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya laba beelood oo shalay ka dhacay deegaanka Raamo oo ku dhow degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi-bari dalka Kenya.
Dagaal ka dhacay Bakool oo ciidanka dowladda goobo kula wareegeen
Sagal Radio Services • News Report • April 26, 2013
Dagaal muddo kooban socdey ayay shalay galinkii dambe Ciidamada dowladu waxaa ay kala wareegeen Deeganka Kulan-jareer oo Gobalka Bakool ka tirsan una dhaxeeya Degmooyinka Xudur iyo Waajid ee Gobalkaasi sida ay xaqiijinayaan dadka Deegankaasi.
Dagaal Dhimasho Keenay oo ka Dhacay Sh/Hoose
Sagal Radio Services • News Report • March 22, 2013
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal uu duleedka magaalada Marka ku dhexmarey ciidamada milatariga iyo maliishiyo degaanka ah oo dhowaan dowladdu balanqaadey in lagu daro ciidanka booliska.
7 ku dhimatay dagaal xooggan oo xalay ka dhacay duleedka Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • March 15, 2013
Ugu yaraan toddoba ka mid ah dhinacyadii adgaalamay ayaa ku dhintay in ka badan toban kalena way ku dhaawcmeen dagaallo culus oo xalay ciidamada dowladda Soomnaaliya iyo kuwa Itoobiya oo dhinac ah iyo xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray duleedka degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Maleeshiyo beeleedyo ku dagaallamay Galgaduud
Afar ruux, ayaa la sheegay inay dhinteen shan kalena ay dhaawacmeen, kadib markii kooxo reer miyi ah ay galinkii dambe ee shalay ay ku dagaallameen tuulada Ismadhaqo, oo lixdan KM u jirta magaalada Ballanballe ee gobolka Galgaduud, sida ay sheegeen dad ka mid ah kuwa deegaanka
Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Kismaayo oo dagaallamay
Sagal Radio Services • News Report • February 23, 2013
Dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka KMG ah ee Kismayo qabsaday, ayaa saaka ka dhacay magaaladaasi, iyadoo xaaladda magaaladuna ay isku badashay mid jahwareer leh.
Dagaal xalay ka dhacay Jannaale oo laba ruux ay ku dhinteen
Sagal Radio Services • News Report • February 20, 2013
Ugu yaraan laba ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay, tiro kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray dagaal xalay ku dhexmaray deegaanka Janaale ciidmada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo xoogagga Al-shabaab.
Dagaal xalay ka dhacay Baydhabo
Magaalada Baydhabo ee xarunta u ah Gobolka Bay ayaa xalay waxaa ka dhacay dagaal geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira, kaasi oo dhexmaray Xoogagga Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda iyo kuwa kale ee gacanta siinaya.
Saraakiisha ciidamada Jubbooyinka oo dagaal ku hanjabay
Janaraal Ismaaciil Saxardiid oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa faah faahin kabixiyay ciidamo tababar kujiray sedax sano oo Agab iyo Mushaar la'aan kacabanayo
Dagaal dhimasho sababay oo Khaatumo iyo Somaliland ku dhex maray Sool
Iska hor imaad u dhaxeeya ciidamadda Somaliland iyo kuwa maamulka Khaatumo ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay bariga degmada Xudun ee gobolka Sool.
Dagaal ka dhacay Gedo oo in ka badan 20 ruux ay ku dhinteen
In kabadan 20 Qof ayaa ku dhimatay tiro inta ka badana wa ay ku dhaawacmeen kadib markii Wadada isku Xirta Garbahaarey iyo Luuq shalay galinkii dambe uu dagaal Xoogan ku dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Ahlu-Suna oo Garabsanaya kuwa Ethopia iyo dhinka kale oo ah Maleeshiyada Shabaab.
Balad-xaawo oo xalay lagu dagaallamay
Ugu yaraan inta la xaqiijiyay shan ruux, ayaa ku dhimatay tiro kale oo badanna way ku dhaawacmeen, ka dib markii ay shalay degmada Buula-xaawo ee gobolka Gedo ku dagaallameen xoogagga al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolkaasi.
Dagaal ka dhacay Shabellaha Hoose oo dad badan ay ku dhinteen
Ugu yaraan toban ka mid ah dhinacyadii dagaalku u dhexeeyay ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal culus oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray deegaanka Leego ee gobolka Shabeellada hoose, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Dagaal ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo ka dhacay Jubada Hoose
Dagaal qiyaastii socday shan saacadood oo xiriir ah, ayaa maanta deegaanka Qalaawila oo 65 KM u jirta xarrunta gobalka Jubada Hoose ee Kismaayo ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Kenya iyo ururka Raaskaambooni oo is garabsanaya iyo kooxda al-Shabaab oo dhinac kale ah.